Maxay yihiin sawir-gacmeedka: sifooyinka ugu muhiimsan iyo shaqooyinka | Hal-abuurka khadka tooska ah
Maxay yihiin sawir-gacmeedyo
Xigasho: Dhaqanka Muuqaal
Sawiradu waa tafsiiro noqon kara calaamad ama toosan, kuwaas oo matalaaddoodu ay ka kooban tahay walxo garaafyo kala duwan kuwaas oo la socda foomamkooda waxayna bixiyaan muuqaal muuqaal ah oo iyaga si farshaxanimo leh u tilmaamaya.
In kasta oo waxaas oo dhan ay jiraan, sawirro ayaa nagu raacay nolol maalmeedkeena waxayna qayb ka ahaayeen qaar badan oo ka mid ah shaqooyinka farshaxanka ee lagu soo bandhigay adduunka oo dhan.
Taasi waa sababta casharkan, aan ku tusinno tusaale sawir ka baxsan nidaamka caadiga ah ama la aasaasay, oo soo bandhigaya sifooyin badan oo shaqeynaya.Marka la soo koobo, waxaan halkaan u joognaa inaan kaala hadalno sawir-gacmeedka. Waxaan ku tusi doonaa qaar ka mid ah hawlaheeda waxaanan kuu sharxi doonaa waxay yihiin, marka lagu daro noocyada kala duwan.
1 sawiro qaabaysan
1.1.1 qoraalka iyo sawirka
2 Sida loo sawiro sawir shaxeed
2.1 mawduuc iyo meel bannaan
3 apps si ay u sawiraan
Sawirka noocaan ah, oo ka duwan kuwa aan inta badan ku aragno sawirada Waa nooc ka mid ah jaantusyada iyo matalaada halkaasoo waxa aan u naqaanno nidaamyo ay aad ugu jiraan.. Intaa waxaa dheer, waxay fulisaa shaqada ugu weyn ee awood u leh in ay falanqeyso oo habayso macluumaadka garaafyada si aad u badan oo isku xiran.
Sida caadiga ah sawirku sida aynu ognahay waxa uu ku dhacaa meel farshaxanimo badan, dhanka kale sawirka noocaan ah ayaa ka cilmi badan, waxaana lagu arki karaa qaabab kala duwan, oo ah muuqaal ahaan iyo buug ama qof gaar ah. anatomy encyclopedia, sida sawirka 3D halkaas oo loogu talagalay in lagu sameeyo oo loo abuuro anatomy ugu fiican ee avatar ciyaar fiidiyoow ah.
Sawirada qaabaysan waxay inta badan ka dhigaan boggaga buugaagta mid aad u weyn maadaama ay tixraac ahaan u adeegaan waxayna kaa caawinayaan inaad si fiican wax u akhrido. Waa sababtaas tan inta badan daabacayaasha, waxaan ka heli karnaa ugu yaraan hal ama in ka badan oo ku celcelin daabacan ah oo sawiradan ah. Waxay yihiin hagaha ugu fiican si aad u ogaato xitaa wax badan oo ku saabsan macluumaadka aad bixin karto.
Astaamaha ugu waaweyn qaarkood waa:
qoraalka iyo sawirka
Waa sawiro halka Waxay ku saabsan tahay isku darka dhinacyada garaafka muhiimka ah sida qoraalka iyo sawirka, ama xaaladdan sawirka. Intaa waxaa dheer, waxay la socon karaan astaamo ay ka mid yihiin fallaadho oo ku toosiyaan aragtida akhristaha ama daawadayaasha waxaynu doonayno inay eegaan. Waxaan ka heli karnaa, tusaale ahaan, buugaagta injineernimada, sida sawirka qayb ka mid ah baabuurta loo muujiyo iyo mid kasta oo ka mid ah qaybaha si gaar ah ayaa loo weheliyaa qoraal halkaas oo ay ku qeexayaan mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Haddii aan ku heshiinno oo aan wax ku heshiinno, waa inay la xiriiraan macluumaadka aan rabno inaan bixinno. Kuwaas oo kala ah, isku day in aad la xidhiidho waxa buul dhan ah waxaana loo baahan yahay in la kala qaybiyo si loo fahmo.
Sida kor ku xusan, waa sawiro lagu dhejin karo calaamado kala duwan, marka laga tago aduunka sawir-qaadista, waxaa lagu bedeli karaa calaamado tilmaamaya wax la mid ah midka aan dooneyno inaan u sheegno ama ku niraahno sawiro. Waa qeexan Waa sawiro aad u shaqeeya oo buuxiya ujeedooyin kala duwan waxaana loo soo bandhigi karaa siyaabo kala duwan.
Sida loo sawiro sawir shaxeed
Si loo sawiro sawir shax gaar ah, Waa lagama maarmaan in la tixgeliyo dhinacyada kala duwan ee dhaqdhaqaaqa.
Ma aha oo kaliya dhaqdhaqaaqeeda laakiin sidoo kale marka la isticmaalayo qalabka u dhigma. Taasi waa sababta ay lagama maarmaan u tahay inaad tixgeliso dhinacyadan maadaama ay qeexi doonaan ujeedooyinkaaga wakhtiga saxda ah ee aad go'aansato inaad bilowdo sawirid.
Waa dhinacyo kooban, inkastoo jaleecada hore ay u ekaan karto wax fudud in la garto, sawir-qaadayaal badan ayaan xisaabta ku darsan oo warkooda looma fasiro sida ugu saxsan.
mawduuc iyo meel bannaan
Kahor intaadan bilaabin sawirka, waxaad u baahan tahay inaad ka fikirto waxaad rabto inaad sawirto iyo cidda aad wax ka qabanayso dhammaan macluumaadka aad hayso. Haddii aan eegno buugaagta carruurta ama daawadayaasha da'da yar, xariiqda garaafka ee sawiradu inta badan waa kala duwan yihiin, mid ka sii dhumucdiisuna, kan kalena waa ka khafiifsan yahay, laakiin waxay ku guulaystaan ​​inay siiyaan qaabka ay u baahan yihiin si ay u fahmaan dadweynaha. . Isla sidaas oo kale ayaa ku dhacda sawirada noocaan ah, waa lagama maarmaan in la ogaado cidda aan wax ka qabaneyno si aan u fahamno sida aan u qaybin karno macluumaadka.
Waxaa jira burush, calamado, qalin iwm. Marka la soo koobo, sawir-qaadaha waa in uu shandadiisa ku buuxiyaa agab isaga ka caawinaya sawirradiisa. Sababtaas awgeed, wax walba ka sarreeya. Waa in aan inta badan xisaabta ku darnaa agabka aan isticmaaleyno si aan sawirada u samayno, in kasta oo ay run tahay in aan hore uga faalloonnay in sawiradani aanay lahayn ereyo farshaxan oo noocaas ah, laakiin ay yihiin kuwo cilmiyaysan, laakiin xarriiqda garaafyada ee la sameeyay waxa loo baahan yahay in lagu dabaqo shay gaar ah iyo in la ogaado dhammaan waxyaabaha la tilmaamay. Marka la soo koobo, baro qalabkaaga.
Haddii aan nahay naqshadeeyayaasha, codka aan kula xiriirno dadweynaha ama macmiilkayaga waa waxa qeexaya sida aan uga horrayno inta kale. Waa hagaag, wax la mid ah ayaa dhacaya marka sawir la samaynayo, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado dabeecadda aan ku siin doono sawiradayada, laakiin halkii laga eego muuqaal badan.
Marka aan ka hadalno codka, waxaan ka hadalnaa sida aan u xoojineyno xariiqda garaafka, midabada ayaa ah kuwa ugu fiican oo ugu fiican ee la socda macluumaadka la soo bandhigay iyo, dhammaan ka sarreeya, waa maxay walxaha garaafka ah ee ugu habboon. Codku waa mid ka mid ah walxaha aasaasiga ah ee lagu xisaabtamayo.
Haddii ay jiraan hal shay oo aan si hubaal ah u naqaanno sawirada, waa sababta oo ah calaamadda ay awoodaan inay baxaan. IYOs in la yiraahdo, mar kasta oo aan sawirno waxaan muujineynaa aqoonsigeena, waxaan u sheegaynaa dhagaystayaashayada sida aan nahay iyo cidda aan nahay. Taasi waa sababta, muddo dheer ka hor inta aan la ogaan waxa uu yahay qaabkeena, waxaa sidoo kale lagama maarmaan ah in la ogaado sida aan ku jiri doono waxa aan sameyneyno.
Nooc kasta oo sawir ah oo aan wajaheyno, waa inaan ka tagnaa shaabad xardhan, si habkan aan u aqoonsan karno nafteena oo aan si fiican u fahamno macluumaadka aan rabno inaan bixinno. Marka la soo koobo, ka tag calaamaddaada ugu fiican.
apps si ay u sawiraan
Qalabkan waxaa lagu gartaa inuu u furan yahay dhammaan noocyada dadweynaha maadaama uu si sax ah ugu shaqeeyo bogga shabakadda. Waa mid ka mid ah aaladaha ugu waxtarka badan tan iyo markii ay suurtogal u tahay in la sawiro jaantusyada iyo wareegyada kala duwan. taasi waxay kaa caawin doontaa inaad si fiican u habayso macluumaadkaaga.
Mid kale oo ka mid ah waxyaabaha xiisaha leh ee qalabkani ayaa ah in ay uga mahadcelinayaan qaab-dhismeedyadeeda, waxay u qaabayn karaan jawiyo kala duwan sawiradaada waxayna bixiyaan dabeecadda ay u baahan yihiin. Marka la soo koobo, haddii aad u baahan tahay inaad sawirto jaantusyada noocaan ah si dhakhso ah oo bilaash ah, waa mid ka mid ah fursadaha ugu fiican.
GitMind waa qalab sidoo kale kuu ogolaanaya inaad abuurto jaantusyo iyo gaar ahaan maab fikradeed. Khariidadaha ra'yiga waa nooc sawir-gacmeed oo mas'uul ka ah xaddididda macluumaadka iyo muujinta si aad u badan oo isku xiran.
Waxa ugu badan ee lagu garto qalabkani waa in marka aad naqshadayso sawiradaada, Waxaad u dhoofin kartaa qaabab kala duwan, ha ahaato PNG, JPG ama xitaa PDF. Waa mid ka mid ah qalabka xiddigaha haddii waxa aad raadineyso ay kala duwan yihiin oo ay fududahay in la dhoofiyo sawiradaada si aad ugu darto warbaahinta kala duwan.
Xigasho: PC Mag
Si ka duwan kuwii hore, LucidChart waxa ay leedahay nooc premium iyo mid bilaash ah labadaba. Kaas oo leh faa'iidooyin gaar ah maadaama aad ka dooran karto xulashooyin badan oo badan. Marka laga tago nooca ka jaban, marka la eego dhinacyo badan oo farsamo, waxay sidoo kale leedahay suurtogalnimada abuurista jaantusyo kala duwan.
Waa aalad ku habboon maadaama ay sidoo kale diyaar u tahay labada Google Drive iyo Kooxaha Microsoft. Intaa waxaa dheer, sidoo kale waa mid ka mid ah fursadaha leh qaabab dhoofin oo kala duwan, taas oo fududeynaysa shaqadeeda oo ka dhigaysa mid soo jiidasho leh.
Sidoo kale way ku fiican tahay haddii aad raadinayso wax fudud oo shaqeynaya.
Coggle waa mid ka mid ah aaladaha khadka tooska ah ee ugu fudud uguna faa'iidada badan si loo naqshadeeyo walxaha garaafyada sida jaantusyada ama jaantusyo fikradeed aad u badan. Waa mid ka mid ah qalabka sidoo kale leh laba nooc oo kala duwan, labadaba bilaash iyo lacag.
Intaa waxaa dheer, waxay leedahay ikhtiyaarka ah in lagu dhoofiyo sawiradaada qaabab aan ahayn kuwa lagu sheegay kuwii hore, maadaama ay sidoo kale Waa suurtogal in lagu dhoofiyo qaab TXT, PDF ama JPG ah. Marka la soo koobo, waa mid ka mid ah qalabka, sababtoo ah marinkiisa, waa sahlan oo degdeg ah, taas oo noqonaysa sabab wanaagsan oo lagu tijaabiyo.
Sawirro ayaa na raacay ilaa taariikhda. Qaar badan oo iyaga ka mid ah waxay ku bilowdeen matalaad yar iyo waqti ka dib, waxay noqdeen habka isgaarsiinta wanaagsan. Haddii aan ka hadalno sawir-gacmeedka, waxaan ka hadalnaa sida aan u sheegi karno waxa aan rabno inaan u sheegno iyo qaabkee.
Taasi waa sababta aan u rajeyneyno inaad wax badan ka baratay adduunka sawir-gacmeedka iyo sawirada. Inkasta oo ay run tahay in ay ka farsamo badan yihiin dhinacyada farshaxanka, laakiin hubaal waxaad awood u leedahay inaad ku sameyso qaar ka mid ah qalabka aan soo jeedinnay.
Hadda waa markaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Maxay yihiin sawir-gacmeedyo
taariikhda nooca arial